‘आगामी दिन अझ चुनौतिपूर्ण छ, कोरोनाप्रति नागरिक आफैँ सतर्क हुनुपर्छ’
काठमाडौं,११ साउन। केही उद्योग व्यवसायलाई बन्द राखी गएको मंगलबार रातिबाट लकडाउन खोलिएसँगै मानिसको भीडभाड, आवत–जावत बढ्न थालेको छ । सार्वजनिक यातायातलाई समेत सञ्चालनको अनुमति दिइएपछि जोखिम झन् बढेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
सरकारले नागरिक र यातायात व्यवसायी दुवैमा स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरी यात्रा गर्ने/गराउने जिम्मेवारी सुम्पिएपनि लकडाउन खुलेपछिका तीन दिन नियाल्दा न यात्रुले सुरक्षा अपनाएको देखिन्छ न त व्यवसायीले नै पालना गरेका छन् मापदण्ड ।
यद्यपी यातायात व्यवसायीले लापरवाही गरे भन्दैमा नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नु हुँदैन । एक व्यक्तिकाे लापरावाहीले समुदाय नै संक्रमित हुने जाेखिम रहन्छ ।
कसरी सुरक्षित भएर गर्न सकिन्छ त यात्रा ?
सामाजिक दुरी कायम गर्ने, सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गर्ने, पञ्जा, सेनिटाइजर प्रयोग गरे केही हदसम्म सुरक्षित हुन सकिने सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘यसमा दुवै पक्ष सतर्क र जिम्मेवार रहनुपर्ने हो । तर यस्तो भएको पाइँदैन । यसले संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले यात्रा गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डहरु पुरा गर्नुपर्छ ।’
परीक्षण घटाइएको हो या कोरोना संक्रमण घटेको हो ?
यसो भन्छन् डा.पुनः
सरकारले आरटी पीसीआर परीक्षण विदेशबाट आएका र उनीहरुको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेकाहरुलाई लक्षित गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म जतिपनि परीक्षण भएका छन्, ती पनि अधिकांश भारत लगायत अन्य मुलुकबाट फर्किएका र क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुकै भएको छ ।
अहिले भारतबाट आउने चाप पनि कम भइसकेको छ, क्वारेन्टिन पनि धेरै खाली भइसकेका छन् । क्वारेन्टिनमा बस्ने संख्या कम हुनेबित्तिकै परीक्षण त यतिकै कम हुने भइहाल्यो । परीक्षण कम भएपछि संक्रमण यसै घटिहाल्यो ।
संक्रमणकालीन अवस्थामा लकडाउन खोल्नु कतिको उचित छ ?
यसलाई मैले सामान्य रुपमा नै लिएको छु । शुन्य संक्रमित होला र लकडाउन खुकुलो बनाउँला भन्ने हो भने अझै धेरै समय लाग्न सक्छ । किनकी छिमेकी देश भारत तथा भारतीय सीमा क्षेत्रमा संक्रमित दर दिनहुँ बढिरहेको अवस्था छ । त्यहाँबाट मानिसहरु सजिलै नेपाल आउने भएका कारण संक्रमण भित्रिने जोखिम कायम रहन्छ ।
लकडाउनको अवस्थामा पनि विभिन्न भारतीय नाकाबाट लुकिछिपी नेपाल भित्रिएको पाइएको थियो । त्यसैले हरेकलाई परीक्षण गरेर मात्रै नेपालभित्र छिर्न दिने कुरा प्रयोगात्मक रुपमा त्यति प्रभावकारी देखिएन । यो सम्भव नभएसम्म हामीले कहिले शुन्यमा पुग्छ र लकडाउन खोलौँला भन्नु व्यवहारिक देख्दिन म ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु धेरै हुनुहुन्छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन हामीले कुनै न कुनै विन्दुमा पुगेर लकडाउन खोल्नैपर्ने हुन्छ । त्यसो भन्दैमा स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने भन्ने त होइन, बरु एकपटक समुदायमा के-कस्तो छ त्यो बुझेर लकडाउनलाई परिमार्जित गर्दै लगेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई ।
अर्को पाटो भनेको सावधानी अपनाउनु हो । त्यसका लागि हामीले समुदायमा सन्देशहरु पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । विगतका प्रयासहरुलाई सुुदृढ बनाउँदै, कमीकमजोरीलाई सुधार्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । लकडाउन मात्रै अचुक अस्त्र पनि होइन ।
जोखिम न्युनिकरणमा नागरिकको भूमिका
लकडाउन खुलेसँगै नागरिकको जिम्मेवारी बढेको छ । कोरोना संक्रमित छैन भनेर लापरवाह भएर हिँड्नुहुँदैन । किनकी नेपालका अधिकांश संक्रमितहरुमा कोरोनाको लक्षण खासै देखिएको पाइँदैन । को संक्रमित छ, कतिबेला सर्छ त्यो थाहा हुँदैन । यो चुनौतिपूर्ण छ ।
त्यसैले हामी आफैँ सचेत भएर हिँड्नुपर्छ । नत्र समुदायमा फैलिन सक्छ, वृद्धवृद्धा, दीर्घ रोगीहरुमा संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढ्छ । उहाँहरुका लागि हामी सतर्क हुनुपर्छ ।
सरकारले पनि जहाँ नियमित रुपमा आवतजावत बढी हुन्छ, भीडभाड हुन्छ, त्यस्तो जोखिमयुक्त क्षेत्र, समूह, वर्गलाई लक्षित गरेर परीक्षण बढाउनुपर्छ । समुदायस्तरमा परीक्षण बढाएमा वृद्धवृद्धा, दिर्घरोगीहरुलाई संक्रमणबाट बचाउन सकिन्छ ।
नेपालमा युवाहरु बढी संक्रमित हुनुको कारण
नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि युवाहरु संक्रमित भएका छन्, मृत्युदर मात्रै वृद्धवृद्धामा बढी भएको हो । कुनैपनि देशमा युवा बढी संक्रमित हुन सक्ने सम्भावना यो मानेमा रह्यो कि उनीहरु कार्यालय गइरहेका हुन्छन्, व्यापार व्यवसायमा उनीहरु बढी सक्रिय हुन्छन् । धेरै मानिसहरुसँग भेटघाट पनि उनीहरुकै हुन्छ । त्यसैले संक्रमणको जोखिम पनि उनीहरुलाई नै बढी हुन्छ ।
विशेषगरी नेपालमा विदेशबाट फर्किएका युवाहरुमा बढी संक्रमण पाइएको हो । हाम्रो परीक्षण पनि तीनै विदेशबाट फर्किएका युवाहरुमा लक्षित छ । त्यसकारण युवामा बढी संक्रमण देखिएको हो । युवाहरुमा संक्रमणको जोखिम बढी भएपनि घर आएर वृद्धमा सार्न सक्ने भएका कारण मृत्युको जोखिम चाहीँ वृद्धवृद्धामा बढी हुने भएको हो । आगामी दिनसम्म पनि यो एउटा चुनौति रहिरहन्छ । त्यसैले हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ ।
आगामी दिन अझ चुनौतिपूर्ण
लकडाउन भएदेखि नै मानिसहरुले अटेरी गरेको देखिन्छ । मास्क पनि ठिकसँग नलगाइदिने, दुरी पनि कायम नगरदिने, यही अवस्था लकडाउन खुकुलो हुँदा झनै बढी देखिन्छ । बाहिर हिँडडुल गर्नेको संख्या पनि बढेको छ ।
अहिले मानिसहरुको मनस्थिति पनि लकडाउन पुरै खुलेछ, संक्रमित छैनन् कि भन्ने पनि परेको छ । हाम्रो हरेक दिनको संक्रमित तथ्यांक पनि कम छ । नागरिकले यो बुझ्नुपर्यो कि जोखिम शुन्य भएर होइन, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि लकडाउन खोलिएको हो । बसमा त अहिले कोरोनाको प्रभावले पनि होला त्यति भरिभराउ देखिँदैन । तर आगामी दिनमा जोखिम बढ्न सक्छ । समस्या आउन सक्छ । आगामी दिन हाम्रा लागि अझ चुनौतिपूर्ण छ । सबै नागरिक सतर्क हुन जरुरी छ ।